Nécrologie du 13 septembre 2021 - ewa.mg
Nécrologie du 13 septembre 2021
News - Nécrologie du 13 septembre 2021
L’article Nécrologie du 13 septembre 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Atsimo Andrefana: sakanan’ny sasany ny Base Toliara
Manova fomba fihariana ny maro any amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Betsaka ny nisintaka amin’ny fanjonoana, ary ny fambolena efa manahirana ny maro noho ny fivadihan’ny toetr’andro. Na tsy mbola antontanisa mazava, hita fa mitombo ny mpivarotra , toy ny amin’ny faritra Analamanga. Betsaka amin’ny olona avy aty afovoan-tany koa no mifindra mivarotra karazan-javatra maro : lamba “friperie », kiraro, kojakoja samihafa, ka izy ireny alain’olona tahaka any amorontsiraka.Azo antoka antoka, dia mihena mian-dalana ny misehatra amin’ny fambolena sy ny jono any Atsimo Andrefana. Olana iray koa ny fifanolanana misy amin’ny andiam-ponina sasany amin’ny tetikasa Base Toliara. Ireo olona anefa tsy manan-katao ny betsaka, nefa ny orinasa mpampiasa vola tsy avela hitrandraka hanomezana asa ny tanora, mivantana na tsy mivantana. Mpiasa iray amin’ireny orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany ireny mantsy , manome asa olona roa na telo hafa, toy ny fitaterana, ny famatsiana akora hafa fampiasa ilaina amin’ny fitrandrahana, sns. Misy ihany mandresy lahatra manentana hiasan’ny Base Toliara, tsy hampandroso ny any an-toerana ihany, fa mampitombo ny harinkarena faobe eto amin’ny Nosy. R.MathieuL’article Atsimo Andrefana: sakanan’ny sasany ny Base Toliara a été récupéré chez Newsmada.
TOKONY AVERINA AMIN’NY FANJAKANA NY TANY…
Olana goavana ny fananan-tany eto Madagasikara ary tsy mbola nahitam-bahaolana hatramin’izao. Na dia efa misy aza ny volavolan-dalana tonga eny amin’ny antenimierampirenena izay efa kian’ny fiarahamonim-pirenena sahady ireo andininy sasan-tsasany. Zava-dehibe kosa anefa ny famerenana amin’ny fanjakana ny tany misy ny « Villa Elisabeth » namidin’ny fanjakana tetezamita tamin’ny Mada terrain. Namoahan’ny Minisitera eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana(M2PATE) tany « arreté ministeriel » izany tany izany. Mangataka ihany koa ireo mpanakanto ny hamerenana ny tanin’i Gégé Rasamoelina izay lasan’ny olona amin’ny fomba tsy mazava. Maro ny mihevitra fa betsaka ireo tany tokony averina amin’ny fanjakana. Averina amin’ny fanjakana. Nahoana tokoa raha averina amin’ny fanjakana avokoa ny tany rehetra eto Madagasikara ? Foana amin’izay ny ady tany izay mampiteny ny moana. Ho foana ny kolikoly mambotry ny madinika sy ny firenena manontolo. Tsy ho heno intsony ny teny hoe « rovitra ny boky , tsy hita ny boky , miverena amin’ny herinandro,… ». Ho foana ny tambajotran’ny mpangalatra tany. Tsy ahitana mpanera intsony eny amin’ny biraon’ny fananan-tany sy fandrefesan-tany manerana an’i Madagasikara. Manofa amin’ny fanjakana. Rehefa miverina amin’ny fanjaka ny tany rehetra, an-jarany ny mitantana izany. Mety ho ampanofainy na akana hetra ireo mampiasa. Rehefa tsy mahafeno ny fepetra ny mpampiasa , esorina aminy avy hatrany ny tany. Efa fanaon’ny tantsaha raha teo ny manofa tany na manome am-pahany izay ifanarahany amin’ny tompon’ny tany. Hanana tany avokoa ny Malagasy rehetra raha izany no tanterahana. Hazoto hamboly ireo tantsaha izay tsy manana tany ny ankabeazany. Mitovy zo ny Malagasy rehetra izay monina sy miary eto amin’ny taniny amin’izay fotoana izay. Ho afaka ny elanelana eo amin’ny mponina tsy manana tany hivelomany sy ny manana velaran-tany betsaka mipetra-potsiny. Nirina R. Cet article TOKONY AVERINA AMIN’NY FANJAKANA NY TANY… est apparu en premier sur déliremadagascar.
Poa-basy, grenady lakrimozena nitora-jofo, doro kodiarana, tora-bato… Izany ny santionan’ireo zava-nitranga tao Toamasina, ny alin’ny zoma teo noho ilay raharaha fahitan’ny tovovavy iray taova sy karandohan’olona tao amin’ny tokantrano iray. Nikasa hanao fitsaram-bahoaka ireto andian’olona marobe ireto. Tsy nanaiky anefa ny mpitandro filaminana…Nirefodrefotra nandritra ny alina manontolo, ny zoma hifoha asabotsy teo, ny basy sy ny grenady lakrimozena nataon’ny mpitandro filaminana handravana sy hanapariahana ireo andian’olona marobe nirohotra nandoro trano sy hanao fitsaram-bahoaka tao amina tokantranona fianakaviana iray eo amin’ny “4 chemins” Morarano Toamasina. Niezaka nanohitra ireo andian’olona naneho ny hatezerana tamin’ny fielezan’ny vaovao momba ity halatra taova ity ny mpitandro filaminana. Nandrehitra kodiarana teo amin’ny arabe sady nitora-bato ny fiaran’ireo mpitandro filaminana izy ireo. Vokany, vaky ny fitaratry ny fiaran’ny polisy. Naratra voatora-bato ihany koa ny polisy. Olona roa avy amin’ireo mpanao fikehetsiketsehana voasambotra hanaovana fanadihadiana momba ity tora-bato sy fandrehetana kodiarana. Mbola nahitana fokonolona mitangorongorona teny an-toerana , omaly mikasa ny hiditra an-keriny ao amin’ilay tranovato misy peta-drindrina mitady mpiasa efa ho ampolon-taona maro.Mpiasa iray nahita karandohan’olona…Toy izao ny raharaha raha hiverenena. Misy soratra amin’ilay peta-drindrina amin’ilay tranovato efa hatramin’ny taona 1991 milaza fa mitady mpiasa. Fianakaviana efa manana ny lazany hatramin’izay izy ireo, araka ny fampitam-baovao. Ny zoma tolakandro teo, nisy tovovavy nitady asa tao amin’ity trano ity ary noraisina hiasa. Ny zoma io ihany, tonga tany amin’ny zandary ilay tovovavy sady efa sempotsempotra nitantara ny hitany tao amin’ilay trano. “Mpiasa vao hiditra hiasa ao amin’ny fianakavian’i T. M. aho ka nahita karandohan’olona sy taolana ary taova samihafa raha iny hiditra tao amin’ny efitrano fandroana iny. Nitsoaka nanao ny fomba rehetra nahafahako nivoaka tao aho raha nahita izany. Izao tonga aty aminareo izao”, hoy ilay tovovavy, araka ny tatitra nampitain’ny zandary ao Toamasina nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, notarihin’ny Prefet, Benandrasana Cyril sy ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ao Toamasina, Rajaonah Thierry. Nangataka fahazoan-dalàna hanao fisavana trano teo anivon’ny fampanoavana ny zandary raha vao naharay izany fiampangana izany ary niroso haingana nanao ny fisavana ilay trano voalaza. Nambaran’ireo mpitandro filaminana nanao ny fisavana anefa fa tsy nahita na inona na inona ry zareo nandritra ny fisavana natao ka anisan’ny antony nanazavan’ny prefet sy ny tonia ny mpampanoa lalàna ny tokony hampitony ny rehetra. Tsy nanaiky izany anefa ireo andian’olona raha tsy misy solontenam-pokonolona navela miditra manao fisavana ao amin’ilay trano, araka ny fanazavana voaray hatrany.Sajo sy Jean ClaudeL’article Fanahiana halatra taova: nirefodrefotra ny basy olona roa voasambotra a été récupéré chez Newsmada.
Fandrakofana ala : hamokatra zana-kazo anetsiny ny Mitsinjo ny ho avy
Handeha lavidavitra kokoa amin’ny handrakofana ala ity Nosy ity. Notokanana, ny 20 oktobra teo, ny tanin-jana-kazo Mitsinjo ny ho avy ao Sahavon­dronina, kaominina Androy, distrikan’i Lalangina. Nitokana izany tany an-toerana ny Fita­lea­vam-paritry ny tontolo iainana (DREDD) Matsiatra Ambony, Rabotovao Mamisoa. Mitan­tana ny tanin-jana-kazo kosa ny fikambanam-behivavy ao an-toerana, miara-miasa amin’ny MNP Ranomafana. Efa notsidihin’ny minisitry ny Tontolo iainana, Raharinirina Vahiniala, vao tsy ela izay, izany toerana izany. Ahitana karazany ireo zana-kazo miisa 12 500 ary tanjon’izy ireo ny hamokatra hatrany amin’ny 150 000 isa. “Miezaka mamokatra “pots biodégradables” , izany hoe, vita amin’ny herana, koa ry zareo ialana amin’ny fampiasana ny “pots plastiques”, hoy ny eo anivon’ny DREDD. Nivoitra tamin ny kabary nifandimbiasana ny olana sy ny fifanampiana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Eo koa ny fampaha­tsiahivana ny fampiharana ny lalàna velona.Synèse R.L’article Fandrakofana ala : hamokatra zana-kazo anetsiny ny Mitsinjo ny ho avy a été récupéré chez Newsmada.
Lakandranon’i Bemanonga: ho an’ny tanimbary sy ny faritra arovana
Nizaha ny fanajariana ny lakandrano mirefy 9 km any amin’ny kaominina Bemanonga, distrikan’i Morondava, ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny harena lovain-jafy, i Baomihavotse Vahinala. Lakandrano manondraka tanimbary 187 ha, diovina sy miantoka ihany koa ny fiarovana ny faritra arovana Menabe Antimena.Nozahana ny fanatanterahan’ireo mpiara-miombona antoka bokin’andraikitra amin’ny fiahiana sosialy sy ny fiarovana ny mponina sy ny manodidina. Anisan’ny fiahiana azy ireo ny fanadiovana lakandrano,ka fianakaviana manodidina ny 1 000 ny hahita tombontsoa, noho ny tanimbary voatondraka. Etsy andaniny, mampiroborobo sy misarika mpizahatany ny fanajana bokin’andraikitra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra hisian’ny fitoviam-pijery tsy hampisy olana eo amin’ny samy mpiara-monina.Mantanteraka ny asa amin’izao fotoana izao ny tetikasa Fanamby sy ireo teknisianina ao aminy. Olona maherin’ny 20 miasa isan’andro ny manadio lakandrano; mitady fanampiana amin’ny faritra hahazoana fitaovam-baventy (engin) koa ny ekipan’ny Fanamby. R.Mathieu L’article Lakandranon’i Bemanonga: ho an’ny tanimbary sy ny faritra arovana a été récupéré chez Newsmada.
Unesco – Ady amin’ny kolikoly: mpianatra maherin’ny 200 no nandray anjara
Tafiditra ao anatin’ny tetikasa « Appui à une gouvernance démocratique à Madagascar ». Ahitana ny fiaraha-miasan’ny Pnud sy ny HCDH ary ny Unesco. Vatsian’ny « Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix » vola…Nanomboka ny 11 aogositra teo, tao amin’ny IKM Antsahavola ilay fampiofanana ireo mpianatry ny lisea sy ny oniversite eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, amin’ny ady atao amin’ny kolikoly miseho any amin’ireo ambaratongam-pampianarana ireo. Nahatratra 203 eo ho eo ireo nandray anjara tamin’ity fanombohana ity. Tafiditra ao anatin’izany ny Lycée Andohalo, Lycée Privé Bouba, Centre d’Infor­mation des Nations Unies, Faculté des Lettres et Scien­ces Humaines Onivesi­ten’An­­ta­nanarivo, Faculté de Ges­tion, Economie et So­ciologie Onivesiten’Anta­na­narivo, ny mpianatry ny Estim, Esdes, Ecole Normale Supérieure, ny Université Ravelojaona… Amin’ny fotoana hamaranana ity « Masters class » ity (faran’ny volana aogositra), hisy ny fifaninanana manoratra lahatsoratra ka ny lohahevitra hovohizin’ireo mpiofana avy any amin’ny lisea : «Ireo zava-dehibe mifamatotra mi­teraka ny kolikoly», raha «Ny ady atao amin’ny kolikoly sy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena manoloana izany» ny an’ny mpianatry ny oniversite.Nanangona : HaRy RazafindrakotoL’article Unesco – Ady amin’ny kolikoly: mpianatra maherin’ny 200 no nandray anjara a été récupéré chez Newsmada.
Zahavoary ao Ankarafantsika: mahavarina ilay lavakabe ao Ankarokaroka
Toerana iray tena mahasarika mpizahatany mitsidika ny valanjavaboary ao Ankarafantsika ny lavaka na antsoina koa hoe « Canyon » ao Ankarokaroka. Misy toerana avo ety ambony ahafahana mitazana ny hakanton’ny lavaka midadasika be izay vokatry ny asan’ny rivotra sy ny ranon’orana ka nanome endrika miavaka. Anisan’ny valanjavaboary 43 tantanin’ny Madagascar National Parks ny ao Ankarafantsika, mivelatra amin’ny faritra 136 513 ha.Valo ny karazana fitsidihana azo atao ao anatin’ny valanjavaboary ka anisany ny fijerena akaiky ny lavaka. 24 km ny lalana azo diavin-tongotra ao anatiny. Raha hidina hijery ny lavaka any ambany, 20 minitra eo ho eo ny faharetany mamakivaky ny ala. Namboarina manokana ny lalana handray ny mpitsidika mandeha an-tongotra tsy hitera-doza ho azy ireo.Tsy maintsy ialohavan’ny mpitari-dalana ny fitsidihana satria be efitrefitra ny lavaka. Nahavariana ny nahita ny cheminés des fées sy demoiselles coiffées voatefin’ny rivotra ka lasa kindrindriana rehefa tazanin’ny maso. Tsy azon’ny mpitsidika kitihina satria malemy ireny cheminés ireny ka mandrava ny hakanton’ny voary.Ankoatra ny Malagasy, maro ny mitsidika ny lavaka be ao Ankarokaroka ny Frantsay sy ny Amerikanina, indrindra amin’izao fotoana izao. Noho ny tsy fandriampahalemana anefa, nihena 14% ny isan’ny mpitsidika. Nanomboka ny fiandohan’ny taona ka hatramin’ny volana jolay lasa teo, 3 117 ny isan’ny mpitsidika tonga nidina tao anatin’ny lavaka be.Ny taona 2018, nahatratra 11 426 ny olona voasarika ka ny 40%, Malagasy avokoa. Manana karazam-borona 130 ao Ankarafantsika ankoatra ny sifaka sy ny angonoka (tsy azon’ny mpitsidika jerena). Rehefa hiakatra indray hamonjy ny toeram-pitazanana ery ambony, misy faritra nokarakaraina ahazon’ny mpitsidika miala sasatra sy mijery ny zava-maniry samihafa.2 000 Ar ny saran’ny fitsidihana ny lavaka be Fikaohan’ny riaka sy ny rivotra tao anatin’ny taon-jato telo teo ho eo no nanome ny endriky ny lavaka amin’izao fotoana izao, tany fasihana no manodidina ny lavaka ka mila fitandremana, hoy ny mpitari-dalana Ratsinjovindraibe Tahiry Germain. 2 000 Ar ny saran’ny fidirana ho an’ny Malagasy raha 55 000 Ar ho an’ny vahiny. 65 000 Ar kosa ny saran’ny fitondrana mpitari-dalana (ho an’ny olona latsaky ny dimy) satria saro-pady ny toerana. 23 ny mpitari-dalana rehetra misahana ny zahavoary ao Ankarafantsika izay entina koa hamelomana sy hampihodinana ny valanjavaboary.Vonjy A. L’article Zahavoary ao Ankarafantsika: mahavarina ilay lavakabe ao Ankarokaroka a été récupéré chez Newsmada.
Toamasina : Telo mianaka nisy namono, hita faty tao an-tranony, efa lo
Maty nisy namono tao an-tranony tao Depôt 4ème Toamasina ireto telo mianaka :Atoa Perez rancisco 64 taona avy any Guadeloupe sy Rtoa vadiny Soa Monica 48 taona, ary ny zanak’izy ireo 07 taona ; izay zaza natsangany mpianatra ao amin’ny lycée français Toamasina. Raha ny zava-nisy, nahita azy telo mianaka ireto dia taorian’ny 08 may teo no nisy namono izy ireo, satria raha ny fanazavana azo dia mbola nianatra ity zaza ity ny alarobia 08 may io, fa ny alakamisy 09 may izy vao nanomboka tsy tonga nianatra intsony; ka tombanana ho ny alin’ny alarobia nifoha ny alakamisy io no nitrangan’ny famonoana azy telo mianaka ireo tao an-tranony. Ny fanazavana azo, dia ny fofona maimbo teo an-tanana tao Depôt 4ème no nanaitra ny mponina ny alatsinainy 13 may teo, ka raha narahana ny fiaviany dia niainga tao amin’ity trano iray ity ilay fofona. Nihidy tao anatiny anefa ny trano ka voatery novakian’ny fokonolona tao an-tanana nijerena ny zava-nisy. Trano nikorontana sy telo mianaka efa maty manomboka ho simba, tao amin’ny efitrano fidiovana no hitan’ny fokonolona. Voatery niantso mpitandro ny filaminana ny filoham-pokontany nijery ny zava-nisy sy nanao fanadihadiana. Teo no nahalalana, fa nisy jiolahy niditra tao amin’izy ireo ary namono azy telo mianaka alohany nitadiavan’izy ireo ny nilainy tamin’ireto fianakaviana ireto. Nohidin’ireo jiolahy tany anatiny ny trano, ka teny an-tafontrano ireo jiolahy no nitsoaka taorian’izany. Ankilan’izany, dia mikasa ny hanao mariazy ny volana desambra izao ity teratany vahiny sy ity teratany Malagasy ity, saingy alohan’izay dia nikasa ny hody kely hamonjy ny fianakaviany ilay rangahy ny 20 may ho avy izao. Vao iray volana teo kosa izay no nifindran’izy ireo tao amin’ny fokontany Depôt 4ème ity, raha ny taona 2010 no efa nifankalala i Francisco Perez sy Soa Monica. Ankoatra izany raha ny fanazavan’ny polisy misahana ny heloka be vava misahana ny raharaha, dia efa misy olona efa-dahy nosamborina tamin’izao raharaha izao, ny alatsinainy 13 may alina teo ihany hanaovana fanadihadiana noho izy ireo ahiana tamin’ity vono olona ity. Tena miantso vonjy amin’ny tsy filaminana ny vahoakan’i Toamasina, satria raha tsy iharan’ny vaky trano arahina vono olona, dia miaina ny fanafihana mitam-piadiana sy asa fanendahana ary halatra môtô saika isan’andro. Malala DidierL’article Toamasina : Telo mianaka nisy namono, hita faty tao an-tranony, efa lo a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kianja Ihosy: vita ny 50% -ny asa fanamboarana
Mandroso tsikelikely ny fananganana ny kianja Ihosy, amin’izao fotoana ka efa mananika ny 50%-ny asa no tontosa. Anisan’izany ny fahavitan’ny « tribune centrale » sy ny trano fiomanan’ny mpilalao ary « gradins ». Ankoatr’izay, efa tafapetraka koa ny akora sintetika nadrakofana ny kianja. Tafiditra tao anatin’ny velirano nataon’ny filoham-pirenena ho an’ny faritra atsimon’ny Nosy ny hahazon’ny ao an-toerana kianja manara-penitra tahaka ny kianja ao Barikadimy. Nidina ifotony ny fotodrafitrasa ny filoha sy tompon’andraikitra ka nijery ny fizoran’ny asa sy nanamafy ny havitan’izany tsy ho ela. Hahazo tombony amin’ity kianja ity voalohany indrindra ny ekipan’ny FC Ilakaka amin’ny hahafahan’izy ireo mandray ny lalaon’ny orange Pro league any an-toerana amin’ny fahavitany. Ankoatr’izay, anorenana kianja mitafo manarapenitra mahazaka mpijery 1000 isa ihany koa eo anilan’ny kianja io. Maro ireo taranja azo ho raisaina ao anatin’izany kianja mitafo izany toy ny Basket-ball, Hand-ball, Volley-ball, Badminton, Tennis, Tennis de table ary koa fifaninanana hay ady sy fibatana fonjamby. Tsy latasa-danja amin’izany ny hisian’ny ireo efitrano rehetra ilaina toy ny vestiaire ho an’ny mpilalao miisa efatra, ny vestiaire hoan’ny mpitsara miisa roa, sy ny efitra fito hafa .Tsiferana R.L’article Kianja Ihosy: vita ny 50% -ny asa fanamboarana a été récupéré chez Newsmada.